Ny tanjon'ity fitsapana ity dia ny fampisehoana ny tariby fampandrenesana ny induction ao amin'ny konektor
Ny fitaovana arotsaka ho an'ity fitsapana ity dia miaraka amin'ny namboarina manokana Indonezianina fanalefahana.
Hery: hatramin'ny 0.48 kW
Ny hafanana: 392 ° F (200 ° C)
Fotoana: segondra 1.5
Ity tariby famatsiana fampitaovana ho an'ny fizotran'ny mpampitohy ity dia nahomby. Nihazakazaka tamin'ny 985 kHz io unit io, ny antony hampiasany fampihenana avo lenta toy izany dia ny mpivady mankany amin'ny halaviran'ny tariby kely. Ny dingana iray manontolo avy amin'ny hafanana natodika mankany amin'ny hamafin'ny mpivarotra dia naharitra 1.5 segondra. Taloha misy vy vy efa namboarina hamita io asa io, na izany aza, ny famonoana induction dia voaporofo fa haingana sy mahomby kokoa. Afaka mandeha ho azy ireo amin'ny alàlan'ny fivoriambe izao, satria afaka mihodina ilay rafitra.
Sokajy Technologies Tags haingam-pandeha matetika, Fiatoana mahazaka tampoka, induction soldering, induction soldering wire, fantson-tariby fampidirana tariby, Masinina famandrana RF, RF tariby fampifamatorana ho mpamatsy, tariby nivarotra ho mpamatsy Post Fikarohana